'Mgbe otu afọ na ọkara gachara na -enweghị ihe nduku, ọ bụ oge izute ọzọ' - Potatoes News
Mgbe otu afọ na ọkara gachara ihe omume nduku, ọ bụ oge izute ọzọ. Ndị na-akụ nduku iri atọ na anọ jiri ohere ahụ, mgbe ha debanyere aha tupu oge eruo, ka ha kpaa maka poteto, gbanwee ozi gbasara ahịa nduku wee mee obere okwu ọzọ.
Ihe ngosi izizi nke Europlant na Gut Schirnau nke dị na obi Schleswig Holstein na ọwa mmiri KielEckhard Simon Cultivation Consultant na EUROPLANT Pflanzenzucht Ltd:
"Na Gut Schirnau ya na ezinụlọ Fedder, anyị chọtara ebe dị mma iji jide ụbọchị ubi maka ndị na-akụ nduku anyị na Schleswig-Holstein."
Ulf Hofferbert Onye na -ahụ maka ndụmọdụ na EUROPLANT Pflanzenzucht Ltd:
"Ohere maka ọnụ ahịa kwụsiri ike n'oge na -abịanụ adịghị njọ."
Na ngwụcha oge mbido nduku, ọnụ ahịa ka dị elu karịa ọkwa afọ gara aga. Ihe na -edochaghị anya maka ihu igwe, obere ihe ọkụkụ na ibelata ala Germany yana Ọdịda Anyanwụ Europe na -enye ndị nwere nchekwube olile anya maka afọ ka mma karịa 2020. Ejiri okooko osisi kpuchie ya, enwere ike igosi ụdị nduku 13 n'akụkụ ha kacha mma na mgbede ahụ.
Kwesịrị ekwesị maka ụtọ North German, odo miri emi, isi nri siri ike ma dị mfe ịkpụ, Glorietta nke mbụ gosipụtara onwe ya. Corinna, nke dabara nke ọma maka ịsa na ịkwakọ ngwaahịa, dị ka ụdị na-esochi ya nke nwere ọdịdị kwụ ọtọ na anya zuru oke, ọkụ, dị larịị.
Dị ka akọrọ, oge ọkọchị na -akawanye elu na ugwu, ụdị dị ka Berninab na -amasịkwa, n'ihi na ndị a anaghị enwe mmetụta maka ikpo ọkụ na oke ọkọchị na -achakwa odo odo na agba, kwụsi ike na isi nri na ụtọ na -atọ ụtọ.
Ọ na-aga n'ekwughị na ụdị ọgbara ọhụrụ nwere ikike ịnabata nitrogen dị elu, ka enwere ike belata oke fatịlaịza ka ị na-enwe ihe ọkụkụ na ezigbo mma.
Ihe ọzọ dị oke mkpa bụ ezigbo nguzogide ọrịa nje nduku kachasị mkpa. Dịka ọmụmaatụ, Karelia floury floury, nke dabara maka ọnọdụ ọ bụla, nwere nnukwu nguzogide cyst nematodes Rostochiensis na Pallida.
Maka ndị na-eri nri chọrọ ịma iri nri nwere obere carbohydrate, enwere ụdị Montana. Ọ nwere ọdịnaya carbohydrate dị ala nke ukwuu mgbe etinyere ya nke ọma yana, ọ bụrụ na nsonaazụ ụlọ nyocha gosipụtara ọdịnaya a dị ala, enwere ike ịpụta ya dị ka nduku "obere carb".
Ụdị Leyla, Belana, Laura na Allians, nke guzosiri ike n'ahịa, dịkwa ebe ahụ, n'ezie. A tụlere uru na ọghọm ha, a gbanwere ndụmọdụ na ndụmọdụ maka ịkọ ihe.
Ozi gbasara ụdị nduku dị iche iche na Schleswig
Tags: iheihe omume nduku
Ngwọta Pringles Ọhụrụ Na-abata na Mkpọrọ nke gbara ọchịchịrị maka Halloween
Maine Potato Board kpọrọ Gregg Garrison 2013 Ezinụlọ Ugbo nke Afọ